Magetsi Bhazi Mhepo Inodzora yeMagetsi Ruviri Dekita Bhazi fekitori uye vagadziri | SONGZ
JLE Series, ye 10-12m mbiri decker bhazi, yakagadzirirwa
Unyanzvi Hwakananga kweMagetsi Double Decker Bhazi A / C JLE Series:
48 kW kana 163776 Btu / h
42 kW kana 143304 Btu / h
Kutonhora Simba Rekushandisa
PTC Simba Rekushandisa
1. Iyo firiji iri R407C.
3. Inofanirwa kuve nechokwadi chekuti inodzikisira feni mhepo inopinda uye inopedza mhepo mushe, uye kuti iyo yekudyira uye yekudzimisa mweya inonyatso kubviswa pasina mhepo uye pfupi dunhu. Kufamba kwemhepo padivi remotokari kunofanirwa kuve≤5m / s.
4. Iyo pombi yemhepo yekushandurwa kwekubatanidza kubva kune yemhepo yekumisidzana yuniti kuenda kune yemhepo pombi mubhazi ine yakasarudzika chimiro, saka dhizaini inofanirwa kutarisisa zvizere kushanda kweiyo yekumisikidza uye kudzikisira kushorwa kwemhepo duct. Yekumhanyisa kwemhepo yekuchinja dhizaini inofanira kuve≤12m / s.
6. Magetsi ekudzora magungano akadai semagetsi mabhokisi ekudzora uye mainverters anotora imwe nhanho yenzvimbo mumotokari, uye inofanirwa kutariswa munzvimbo isina mweya uye isina mvura.
7. JLE-IIIB-T yakadzoserwa kumashure (kupisa pombi pamwe nePTC) yakabatanidzwa bhatiri kupisa kwemafuta basa.
Ndapota taura nesu pa sales@shsongz.cn kune zvimwe zvingasarudzwa uye tsanangudzo.
1. Iyo yakazara furemu dhizaini, inosanganiswa nealuminium alloy shell, yakakura muhukuru uye nechiedza uremu.
2. Adaptive frequency kutendeuka tekinoroji inoziva synchronous kusiana kumhanya mamiriro e compressors uye mafeni, ichideredza kushanda kwesimba kushandiswa.
3. Tsika kusimudzira, modular dhizaini, kurema uremu.
4. DC brushless fan, hupenyu hwakareba uye huremu hwakareruka.
5.Iye kupisa pombi dhizaini, kana ichienzaniswa neyakachinjika shanduko, inogona kuona kupisa pombi kupisa uye kudzikisa simba rekushandisa.
6.CAN bhazi kutonga, chengetedza interface uye kumashure kweinotevera kufambiswa kwebhasi network network.
7. Pfuma yakasarudzika tekinoroji
7.1. "Cloud kudzora" basa, ziva kure kudzora uye kuongororwa, uye nekuvandudza chigadzirwa sevhisi uye kugona kugona kuburikidza nekushandisa kukuru kwedata.
7.2. Yakakwira-voltage yekubatanidza anti-yakasununguka tekinoroji
7.3. Yakabatanidzwa bhatiri thermal manejimendi basa, zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi pasina kukanganisa kutonhora kwemota.
7.4. DC750V yakakwira voltage
Pashure: Magetsi Mhepo Inodzora yeMagetsi Bhazi uye Kochi, Double Mhepo Kudzoka
Zvadaro: Bhatiri Thermal Management Sisitimu yeMagetsi Bhazi, uye Kochi